Kenya diyaar uma ahan inay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya "Kala bixitaanka waa waajib saaran UN & AU" - AxadleTM
Kenya diyaar uma ahan inay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya “Kala bixitaanka waa waajib saaran UN & AU” – AxadleTM
Dowladda Kenya ayaa meesha ka saartay inay ciidamadeeda kala baxeyso Soomaaliya inkastoo uu jiro xiriir u dhexeeya labada dhinac.
Xoghayaha Golaha Difaaca Kenya Dr. Monica Juma ayaa sheegtay in ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya la geeyay magaca AMISOM waxaana dib u celinta ay ku xiran tahay ogolaanshaha golaha amaanka ee Qaramada Midoobay.
Monica Juma ayaa hadalkan sheegtay iyadoo ay weheliso xoghayaha gaashaandhigga Ingiriiska Ben Wallace xilli ay booqaneysay xerada tababarka ee Batalyanka (Batuk) oo ku taal xerada Nanyuki intii uu socday furitaanka xeryaha Nyati.
Juma ayaa ku celcelisay in Kenya aysan u taalo go’aan ka gaarista ka bixitaanka ciidamada amniga ee Soomaaliya.
“Bixitaanku waa waajibaadka Midowga Afrika (AU), hay’adda idman, ma go’aansanayno goorta aan gelayo ama ka baxayo AMISOM,” ayuu Juma u sheegay wariyeyaasha ka dib markii uu booqday xeryaha Nyati.
Juma iyo Wallace ayaa xusay in ciidamada Kenya ay muddo dheer ku sugnaayeen gudaha dalka Soomaaliya wax badana ay ka barteen waxa loogu yeero kooxaha argagaxisada ah sida Al Shabaab isla markaana ay wadaagaan taariikh guud ciidamada Ingiriiska ee tababarka ku qaadanaya dalka Kenya. iyagoo la wadaagaya khibradooda milatari ee safaradoodii Afghanistan iyo Ciraaq.
Marka la isku daro aqoontaas iyo shaqaalaha tababarka wadajirka ah waxay gacan ka geysan doonaan xaqiijinta amniga dadka reer Kenya ee shaqadooda maxaa yeelay diyaaradaha wax duqeeya waa kuwo xariif ah, caqli badan oo qatar ah. ”Ayuu yiri Wallace, oo garab taagan wasiirka gaashaandhigga Kenya.
Wallace wuxuu intaas ku daray in wixii faafin ah ee COVID-19, booqashooyinkiisii ​​ugu dambeeyay ee Boqortooyada Ingiriiska uu Axadii ku yimid Kenya, isagoo intaa raaciyay inay jiraan 200 oo askari oo si joogto ah ugu sugan saldhiga Nanyuki, Kenya.
“Waa mustaqbal xiiso leh annaga waxaan sidoo kale u aragnaa Kenya inay leedahay awood sare oo milatari, gobol leh qiime wadaag iyo waliba cadaw guud – Al Shabaab oo beegsanaysa dadka reer Kenya., Dalxiisayaasha iyo dhammaan qiyamka aan u istaag. ”ayuu ku daray Wallace.
Xoghayaha gaashaandhigga Ingiriiska wuxuu intaas ku daray in hadda oo ay labaduba Kenya iyo UK ay xubno ka yihiin Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, ay si dhow uga shaqeyn doonaan xaqiijinta xasilloonida Geeska Afrika iyo dhammaan gobolka Bariga Afrika.
“Britain iyo Kenya waxay hada kujiraan Golaha Amniga ee sanadkaan. Britain waa Gudoomiyaha halka Kenya ay qaadatay mowqif isku mid ah, taasi waa war wanaagsan, waxaana si wada jir ah wax uga qabanay afarta arimood ee Kenya mudnaanta siineyso: isbadalka cimilada, ladagaalanka argagixisada, qaran- dhismaha iyo xasiloonida gobolka waana halka ay Britain si buuxda ugu raacsan tahay. Kenya, ”ayuu yiri Wallace.